I-OnePlus 7T iya kubiza i-23% ngokukhawuleza kune-OnePlus 7 Pro | I-Androidsis
I-OnePlus 7T iya kuphucula ukutshaja ngokukhawuleza
I-OnePlus 7T yimodeli ekulindeleke kakhulu ukuwa. Sele igqithile iveki ukuba ekugqibeleni ityhilwe umhla wokufayilisha ngesixhobo esiseYurophu, esineeveki ezimbalwa sisesazo. Nangona ukuhamba kweentsuku sifunda ngeenkcukacha ngalo. Umzekelo, uyilo lwayo alugcini zimfihlo zininzi, enkosi kwiifoto ezabiwe yi-CEO.
Ngoku ziinkcukacha malunga nebhetri yakho kunye nokutshaja okukhawulezayo kwefowuni ekwabelwana ngayo. I-OnePlus 7T iya kusebenzisa i-Warp Charge 30T, eluhlobo oluphuculweyo lwentlawulo ekhawulezayo yohlobo lwesiTshayina. Enkosi kuphuculo lwayo luya kusebenza ngakumbi.
Njengoko sele iqinisekisiwe, le ntlawulo yeWarp Charge 30T iya kugcina amandla angama-30W esiwabonile kwiimodeli zangaphambili. Akuyi kubakho lutshintsho kumandla alo, kodwa kuya kubakho utshintsho ekusebenzeni kakuhle. Ndiyabulela koku, i-OnePlus 7T iya kuba nakho ukubiza ukuya kuthi ga kwi-23% ngokukhawuleza kune-OnePlus 7 Pro.
Uphuculo olubalulekileyo kule nkqubo, oluya kuvumela ngale ndlela ukutshaja yonke ibhetri ephezulu ngokukhawuleza okukhulu. Umphathi omkhulu wenkampani iqinisekisile ukuphuculwa okuza kubakho kule nkqubo Kudliwanondlebe. Intsimi apho bajolise khona kwiinzame ezininzi.
Eli nqaku liza ne-OnePlus 7T, kodwa kolu dliwanondlebe kuyacetyiswa ukuba khange lifike neemodeli zangaphambili. kuba bendingekakulungeli. Kubonakala ngathi i-Warp Charge 30T ngoku ilungile kwaye isebenza ngendlela oyifunayo. Ke ngoku ibandakanyiwe kwesi sixhobo sitsha senkampani.
Olunye lolona tshintsho lubalulekileyo kwiWarp Charge 30T kukuba ulawulo kunye nolawulo lwamandla iya kwenziwa kwitshaja ngokwayo, endaweni yefowuni, njengangaphambili. Yiyo le into eya kuvumela i-OnePlus 7T ukuba yonwabe ngokukhawuleza nangakumbi nangakumbi xa usenza intlawulo ngalo lonke ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OnePlus 7T iya kuphucula ukutshaja ngokukhawuleza
Isamsung kunye neRealme smartphones banezinga eliphantsi lokubuyela eIndiya
IXiaomi Mi MIX Alpha iya kuba nesona sikrini sigobileyo kwintengiso